နေအိမ် / Archives for Arbitration Award
27/11/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အာဂျင်တီးနားရဲ့စီးပွားရေးကိုကြုံတွေ့သည့်ကြီးကျယ်သောစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းပြီးနောက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ဦးတည်ခံရဖို့ပုံရသည် 15 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ, အရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအငြင်းပွားမှုများအခြေချခြင်းအဘို့အအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Center မှာအာဂျင်တီးနားဆန့်ကျင်မှုကိစ္စများစွာမှဦးဆောင် (ICSID). အလွန်ပြည့်စုံသောနိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအပြင်, အဆိုပါအာဂျင်တီးနားအစိုးရကိုလည်းဥပဒေရေးရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည် […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အာဂျင်တီးနားအနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ
Mytilineos v. ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ: ဆားဘီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်အတွင်းခံထိုက်ပေကျင်းပ
အဆိုပါ 2013 ဆားဘီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိ၏သမ္မတနိုင်ငံ v Mytilineos သြဂုတ်လအတွင်းကနှစ်ကုန်လေ၏ 2017 နှင့်ဆားဘီးယားသက်ဆိုင်ရာနှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်ချိုးဖောက်ရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်. Mytilineos ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ, RTB Bor သက်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိ, ပုဂ္ဂလိကပိုင်မှဘာသာရပ်ခဲ့တဲ့ကြေးနီသတ္တုတွင်းနှင့်ရောစပ်ကုမ္ပဏီ. ခုံရုံးရှိပါတယ်နေစဉ် […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး
02/07/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
နိုင်ငံခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကတစ်ခုံသမာဓိဆု၏ပလပ်ခြင်းပြင်သစ်တွင်ခုံသမာဓိဆု၏ဘက်တော်သားငြင်းဆန်များအတွက်မြေပြင်မဟုတ်ပါဘူး. နိုင်ငံခြားခုံသမာဓိဆု၏ဘက်တော်သားအပေါ်ပြင်သစ်တရားရုံးများ၏အဆက်မပြတ်အနေအထားတစ်ခုဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ခုံရုံးက de Grande * Instance d'တိုင်းတို့ကပြန်ပြောပြထားသည် 10 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017, ပြန်ထုတ်ပေး […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်ဆုကို၏ဘက်တော်သား, ပြင်သစ်အနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ
S က SpA v. T က GmbH သည်, တရားရုံးချုပ်, ဖြစ်ရပ်မှန်အဘယ်သူမျှမ. 180Cg1 / 15v, 23 ဇွန်လ 2015
06/06/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ဤကိစ္စတွင်, တစ်ဦး VIAC စီးပွားဖြစ်ခုံသမာဓိထဲမှာပြန်ဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆုကနေရရှိလာတဲ့, စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုသြစတြီးယားဥပဒေအောက်တွင်တစ်ခုံသမာဓိသဘောတူညီချက်များ၏တရားဝင်မှု၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များ. အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအချက်အလက်များဖြစ်ကြသည်: ဂျာမန်အတိုင်ပင်ခံ S ကို SpA နှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုအတွက်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး, အီတလီကုမ္ပဏီ, အပူပြောင်းလဲခြင်းများရောင်းရန်ရှိသည်. ဤသည်စာချုပ်ခဲ့ […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, သြစတြီးယားအနုညာတစီရင်, ဂျာမဏီအနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ, တရားမျှတရေး၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး, အီတလီနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, ခွင့်အာဏာ